Ridzọ, unusuallọ ndị pụrụ iche ma mara mma, isi pizza na Aperol, mee Venice a ebe nro maka ezumike obodo na Europe. Obere ya, ngosi ihe mgbe ochie, ebe nlegharị anya ga - eme ka ị ghara ịna - arụ ọrụ ruo ngwụcha izu na nkenke. A na-enwe obere piazza mgbe niile n'akụkụ ebe a na-eme ihe, ebe inwere ike nodu ala, nwee cappuccino na panini, ma ọ bụ mesoo onwe gị bred na-atọ ụtọ n’ebe a na-edebe ihe ochie.
Ọ bụrụ n ’ị nwere ezé dị ụtọ, will gha enwe ezumike ezumike obodo dị egwu na Brussels. Brussels nwere ọtụtụ ihe ịkekọrịta ma gosi gị ya, dika ihe omuma chọkọleti a ma ama n’ụwa na waffles. Na mgbakwunye, karịrị 100 ngosi ihe mgbe ochie na-eche gị na Brussels. Mgbe ịgachara ndị kachasị mma ị nwere ike ịga rue rue Danseart maka ụta ị ga-eri n'ụlọ nri kachasị mma. Ihe ọzọ dị oké ọnụ ahịa na Brussels bụ ịma mma Ebe Sainte-Catherine na Chatelain ebe ọdịnala.
Otu n’ime ihe kachasị mma ị ga-eme na Budapest bụ iwere ụgbọ mmiri gbadaru n’osimiri Danube. Thezọ kachasị mma iji nwee ike ịmasị obodo na ije dị na Budapest bụ ụgbọ mmiri. Ya na nnukwu ihe eji eme ya, isi obodo Hungaria bu ihe di elu na elu anyi 10 obodo kacha mma nkwụsịtụ na Europe.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta tiketi ụgbọ ala kachasị ọnụ gaa nke ọ bụla mara mma njedebe obodo ị na-eme atụmatụ!
You chọrọ itinye mgbagha blọọgụ anyị “10 Best City Breaks na Europe” na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-city-breaks-europe/ የሰማይ አካላት– (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)